Brazil Sao Paulo Monorail Map: São Paulo Monorail, usoro monorail kachasị ibu na United States, mepere na 2014, na-arụ ọrụ na ọsọ 80 km / h na-agba ọsọ azụmahịa na Sao Paulo, Brazil. driverless [More ...]
Antalya Metropolitan Municipality Mayor Onye Isi Ndụmọdụ, na-ekwupụta na ha na-eme atụmatụ ime ka mmekọrịta dị n'etiti ámá Liman na Antalyaspor. Cem Oguz, "Ọ bụrụ na anyị si ebe a na-anọ n'ọgbọ egwuregwu ruo ọdịda anyanwụ nke Kundu 16 kilomita nke ngalaba anyị nwere atụmatụ ụzọ ụgbọ oloko" [More ...]
Monorail, nke e mere atụmatụ ime n'etiti Gaziemir ESBAŞ na ebe ntanetala na Gaziemir New Fairground (Fair İzmir) na nke mbụ 2016 afọ na İzmir n'okpuru onyeisi oche nke Aziz Kocaoğlu, weghachitere ya na onyeisi oche ọhụrụ Tunç Soyer. [More ...]
10 New Metro Line nke a ga-ewuru na Istanbul Kedu mpaghara Ga-enwupụta Kpakpando na Housinglọ: Usoro kachasị mkpa nke 10, nke na-abịaru nso na ọrụ ya na Istanbul, na-eme ka njem nke ọtụtụ ebe si Bakırköy gaa Çekmeköy, Kağıthane ruo Zeytinburnu. [More ...]
Mahadum Canakkale Onsekiz Mart (COMU) nke Ngalaba Injinịa lara azụ lara ezumike nka. Dr. Doğan Perinçek dọọrọ uche gaa n'ọrụ ahụ ọ tụrụ aro maka obodo ahụ na social media. Aha ya na social media [More ...]
Karalọ ikpe na-achị achị Ankara 11, berlọ nke Architects Ankara Ala nke karalọ Ankara Court megide mbibi nke ebe a na-ebugharị njem na ikpe ahụ, kpebiri ịkwụsị ogbugbu ahụ. Berlọ nke Architects Ankara mkpebi Alaka, “decisionlọ ikpe nwere ike ịnweta [More ...]
Onye nnọchi anya CHP Ankara Nihat Yeşil, onye kwuru na Havaray bụ usoro usoro ụgbọ oloko na-adịghị ọnụ karịa karịa Metro, na-enwe nchegbu banyere ahịrị ndị njem nke ọha na ndịkarị ụdị ụgbọ njem monorail nke enwere ike ịbanye na Metro. [More ...]
E nwere ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti “njem” na “njem .. Ankara osote Nihat Yeşil; Enweghị nkọwa ma ọ bụ echiche nke Plan Transportation unda na Iwu Mmepe. Onye Ministri Transportgbọ njem nwere ikike na Master Plans of Cities anyị; Metropolitan [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul Mevlüt Uysal mere ka ndị otu ahụ mara banyere ọrụ ahụ site na inyocha oru a nke a ga-eji rụọ ọrụ dị ka ogige 5 puku square mita na ebe a na-adọba ụgbọala isii na-ewu na Küçükçekmece. Onye isi ala Uysal [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul Mevlüt Uysal nyere ndị otu akụkọ banyere ozi site na nyocha banyere owuwu ogige 15 puku square mita nke ga-eji dị ka ebe ngbasa isii na-arụ ọrụ na Küçükçekmece. Onye isi ala Uysal nwekwara [More ...]
Sefaköy-Başakşehir Havaray oru kagbuo. A ga-arụ ọrụ ụzọ ụgbọ oloko na nke dị nro karịa Havaray. Mevlüt Uysal, onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), gbara arụkwaghịm mgbe Onyeisi Tayyip Erdoğan rịọrọ ka arụkwaghịm ya. [More ...]
Itinye ego na mbufe njem, nke ga –ebelata nsogbu nke okporo ụzọ ma mee ka Istanbul kuo ume, na-aga n’ihu ọsọ. Obodo mega nke Istanbul enwetabeghị azịza maka ọtụtụ [More ...]
Obodo si Vadistanbul Havaray
Obodo si Vadistanbul Havaray: Ebe a na-ere ahịa na ọrụ Vadistanbul mepere ndị ọbịa. Ala nke Evyap Holding nke dị na ebe a na-azụ ahịa mezuru na puku kwuru puku kubit na mmekọrịta nke Artaş İnşaat na Invest İnşaat [More ...]
Ndị egwu Galatasaray ga-enwe ike izukọta na VADİSTANBUL ebe a na-ere ahịa VADİSTANBUL AVM, otu n'ime ebe kacha amasị ndị Istanbul, tupu egwuregwu ahụ na T atrk Telekom Stadium. Egwuregwu Türk Telekom na Cendere, Hasdal, Kemerburgaz TEM na-ejikọ okporo ụzọ [More ...]
Cityscape Global 2017, nke e lere anya dị ka otu n’ime nzukọ ụlọ na ụlọ ihe kachasị mkpa n’ụwa mepere ọnụ ụzọ ya na Dubai. Cityscape Global 2017, nke a na-ahụta na otu nzukọ ụlọ na ụlọ ịkpa agwa kacha mkpa n’ụwa, dị na Dubai [More ...]
Ebe obu na oru Havaray jikọtara ya na oru abuo abuo, a gha atughari ya ozo. A kagbuwo ịdị nro maka ihu igwe mbụ nke Istanbul na ụzọ na-agbanwe agbanwe. Site na ọrụ abụọ dị iche iche [More ...]
Alarko Holding's Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Line Construction, Electro-Mechanical, Ọrụ Ọma na prozụta Vegbọala kwuru na akagbuola ihie ya. Alarko 1 ijeri 292 nde TL na nro [More ...]
Atumatu Rail Sistemụ Ntanetị ga-eme akara ya na 2019 na Istanbul
Havaray na Dekovil ahọpụtara uche na oru usoro ụgbọ oloko a ga-etinye n'ọrụ na 2019 na Istanbul. Ezie na mbupụ njem njem nke obodo Metropolitan na-agabigaghị, mpaghara niile dị [More ...]
Chamlọ ndị na-ahụ maka ihe owuwu ụlọ Ankara kwuru na usoro monorail agaghị edozi nsogbu ụgbọ njem Ankara ma na-eweta nnukwu ego. Ọchịchị obodo Ankara mere n’oge na-adịbeghị anya mere ka ọ dịrị ndị ụlọọgwụ obodo a mfe n’iwu na Etlik na Bilkent. [More ...]
E mechiri ụlọ ọrụ 4 na ikuku ikuku mbụ nke Istanbul: Total ụlọ ọrụ 2 na Alsim Alarko na Doğuş Construction, nke nyefere onyinye 4 kacha dị ala n'ihi nsonaazụ ndị mbụ ikuku dị n ’Istanbul [More ...]
Metrozọ Ọgbọ Mịnịstrị na Havaray na-abịarute Maltepe: Onye isi obodo nke Istanbul Metropolitan Munji Kadir Topbaş zutere ụmụ amaala na nnọkọ ahụ na Maltepe. Onye isi ala na-agwa ndị Maltepe okwu na-eji ọkọlọtọ Turkey n'aka ndị na-eme mkpọtụ ahụ [More ...]
Istanbul havaray Valley Okporo ígwè Line na Tools Na: ndagwurugwu oru ngo, atụmatụ na Istanbul, Turkey mbụ onwe havaray emepụta Switzerland, n'ime akporo nke oru ngo-a belatara abụọ monorail okporo ígwè ụgbọala. Artaş -Iso Adi [More ...]
Turkey mbụ Havara: Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir Topbas Metro n'ebe ọ bụla N'ebe nile Havara onodu nke Turkey mbụ ụgbọ oloko oru ngo-amalite Istanbul. Nri nke ikuku culinary n'etiti Küçükçekmece Sefaköy na Başakşehir [More ...]